अरू कसैको घरमा डबल सिंक डिजाइन देखे पछि, म ईर्ष्यालु थिएँ!
घर / ब्लग / अरू कसैको घरमा डबल सिंक डिजाइन देखे पछि, म ईर्ष्यालु थिएँ!
2020 / 12 / 12 वर्गीकरणब्लग 4439 0
Ou Xiaowei बाथरूम व्यापार स्कूल
बिहान सबेरै र हतारमा
सबै प्रकारका असुविधाहरू teeth जब दाँत धुने र ब्रशको लागि निचोल्दै।
के तपाईंले कहिल्यै यस्तो प्रकारको समस्या अनुभव गर्नुभएको छ?
सि s्क बेसिन बाथरूममा हुनु पर्दछ। र धेरै मानिसहरु लाई लाग्छ कि उनीहरुलाई आफ्नो बाथरूमको लागि केवल एउटा बेसिन चाहिन्छ। डबल बेसिन डिजाइन केवल ठूला स्टोरहरूमा सार्वजनिक वाशरूमहरूको लागि उपयुक्त छ।
वास्तवमा, डबल बेसिन घर प्रयोगको लागि समान रूपमा उपयुक्त छ।
दुई व्यक्तिले एकै पटक धुनु पर्छ र एकै समयमा एउटा सिink्कको अगाडि निचोर्नु पर्छ। यो केवल बोझिल मात्र हैन तर अयोग्य पनि हो, र डबल डूबले सजिलैसँग यो समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। एक डबल बेसिन मात्र अधिक कुशल छ, तर यो पनि अधिक स्टाइलिश हुन सक्छ।
अन्डरकौंटर बेसिन: कुनै डेड स्पेस छैन र सफा गर्न सजिलो छैन
▲अन्डर काउन्टर बेसिनको विकल्प, सिंक अन्तर्गत। काउन्टरटपमा पानीको दागहरू बेसिनमा सजिलैसँग बहाउन सकिन्छ जसले सफाईलाई अधिक सुविधाजनक बनाउँछ। बेसिनको माथि ठूलो क्षमतामा झुण्डिएको क्याबिनेट परिवारको शौचालय राख्न समस्या छैन। बेसिन माथि ठूलो क्षमता ह्या hanging्गिंग क्याबिनेटको साथ सफा गर्न सजिलो छ।
बाथरूममा डबल बेसिन बाथरूम क्याबिनेट राख्नु राम्रो विचार हो। तपाईं सँगै नुहाउन चाँडै उठ्न सक्नुहुन्छ, र रोमान्टिक समय स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक राम्रो विचार हो ऐना छ कोठामा समान रूपले प्रकाश पूरक गर्न ताकि तपाईलाई प्रकाशको एक तर्फ ब्लक भइरहेको बारे चिन्ता गर्न पर्दैन।
को संयोजन "डबल बेसिन + डबल गोल मिरर" लक्जरी को भावना नगुमाईकन प्यारा र फेसनशील छ। आईनामा बीचमा सानो झुण्डिएको क्याबिनेट टुथपेस्ट र टूथब्रश भण्डारणको लागि उपयुक्त छ। को संयोजन "ड्रअर + खुला डिब्बा + साइडबोर्ड" बेसिनको मुनि प्रयोग गरिन्छ जुन सजिलैसँग बाथरूममा ठूला र साना चीजहरूको भण्डारण आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दछ।
एक टुक्रा रक स्लैब बेसिन: न्यूनतम परिष्कार
▲ रक स्लेट तातो छ, र रक स्लेट डबल बेसिनको प्रयोग असाधारण होटल शैली, पूर्णको विलासी भावना सिर्जना गर्न। रक स्ल्याब मूल्यमा उच्च मात्र होइन, तर गुणस्तरमा पनि उत्कृष्ट छ। मोहस कडाई मापन मा of को कडाई संग, यो टिकाऊ र स्क्र्याच प्रतिरोधी हुनु को फाइदा छ।
▲यो न्यूनतम र उन्नत भावना राख्नको लागि उत्तम तरिका हो। यसले भण्डारण आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न सक्छ। अर्ध-खुला डिजाइन साना वस्तुहरूको लागि भण्डारण ठाउँ प्रदान गर्दछ, र अर्ध-खुला डिजाइन उच्च र कम उपयोगको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
You यदि तपाईं अधिक भण्डारण ठाउँ चाहनुहुन्छ भने, किन डिजाइन नगर्नुहोस् "ड्रअर + साइडबोर्ड" स्लैब सिंक अन्तर्गत भण्डारण संयोजन? ड्ररले साना सामानहरू भण्डार गर्न सक्दछ। ड्ररहरू साना सामानहरू भण्डार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र ढोका घरका सामानहरू भण्डार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठाउँको उपयोग बढाउन यो एक राम्रो संयोजन हो।
काउन्टरटप बेसिन: धेरै शैलीहरू र प्रतिस्थापन गर्न सजिलो
Ter काउन्टरटप बेसिनहरू विभिन्न प्रकारका शैलीहरूमा उपलब्ध छन् र प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ। यो व्यक्तिको लागि राम्रो विकल्प हो जुन फरक डिजाइन शैलीहरू छनौट गर्न चाहन्छन्।
▲सेतो अल्ट्रा-पातलो किनार डबल बेसिन सेतो लाक्क्रेड क्याबिनेटको साथ। दर्पण क्याबिनेट संयोजन ठाउँ क्षमता ठूलो छ, बाथरूम भण्डारण दबाव कम गर्नुहोस्। तौलिया भण्डारणको लागि डबल बेसिनको बीचमा डबल खुला डिब्बा, धुनेको लागि प्रयोग गर्न सजिलो।
कम र उच्च बेसिन: बच्चाहरू नुहाउनको लागि सजिलो
यो घरमा अधिक बच्चाहरू हुँदा यो उच्च वा कम बेसिन छनौट गर्न अधिक सुविधाजनक छ। कम बेसिन प्रयोग गर्नको लागि लामा नहुने बच्चाहरूको लागि यो उत्तम हो। बच्चाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नुहाउन र आत्म-देखभाल क्षमता विकास गर्न यो धेरै सुविधाजनक छ।
▲चप्पल राख्न बेसिन मुनिको खुला डिब्बा सिर्जना गर्नुहोस्, जुन नुहाउने र परिवर्तनको लागि उपयुक्त छ। भिजेको र सुक्खा छुट्याउन राम्रो नुहाउने राम्रो उपाय हो, अन्यथा सोख्न र विकृत पार्न सजिलो हुन्छ।
यदि तपाईं घरमा एक डबल बेसिन स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले यिनीहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
▲ बाथरूममा डबल नाली हुनु पर्छ वा टीजको साथ retrofitted हुनु पर्छ।
Hot तातो र चिसो पानी इनलेट पाइपमा त्रिकोण भल्भहरू सकेसम्म चाँडो स्थापना गरिनु पर्छ र डिजाइनरलाई पहिल्यै सूचित गर्नु पर्छ।
▲ यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग दुई बेसिनहरू बीच प्रशस्त ठाउँ छ।
Both दुबै पक्षमा पर्याप्त प्रकाश कायम गर्न दुई मिरर बत्ती कन्फिगर गर्नु उत्तम हुन्छ।
Use यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, र काउन्टरटपको उचाई प्राय: ~०० ~ 600० मिमी हुन्छ, जुन प्रायः व्यक्तिको उचाईसँग मिल्दो छ।
अघिल्लो :: स्नानगृहले गिलासलाई सुख्खाबाट छुट्ट्याउन ग्लास प्रयोग गर्दछ, जुन उज्यालो र विशाल छ अर्को: माफ गर्नुहोस्, चर्पीमा यी समस्याहरू छन्, गुणवत्ता समस्या होइन!
2021 / 01 / 11 1826